Yusuf Garaad: Gar waa loo Islaam
Waxaan daawaday video shir uu xisbiga talada haya ee Kulmiye uu ku qabtay Hargeysa. Nin aan aqaan, oo ilaa yaraanteydii aan aqaannay xaggeygana qiimo weyn ku leh ayaan daawaday oo u cabanaya qaab kolley aniga i damqay.
Mudane Cali Cabdi Saayaq, isaga oo Ashahaadka qiraya ayaan daawaday si uu u caddeeyo in uu Muslim yahay.
Mudane Cali waxaan bartay toddobaatanaadkii aniga oo arday ah. Intii ka dambeysayna waan aqaannay. Deris ama jaar ayaan ahayn. Meel ay iska galaan Wardhiigleey iyo Towfiiq oo ah Degmada Yaaqshiid kana fogeyn Dugsiga Sare ee General Daud ayay ahayd.
Mudane Cali Cabdi Saayaq waxaan ku aqaannay nin Muslim ah, ahalu salaad ah, Allah ka cabsada, ahna nin muruqmaal ah. Nin ladan ayuu ahaa oo reerkiisa dhaqda, baabuur uu isagu leeyahay ku socda, welibana leh hooso Baabuurta lagu sameeyo. Qiyaas nin xilligaas intaa haystay.
Mudane Cali si kale uma aqoon, markii aan Radio Muqdisho ka billaabay shaqo horraantii siddeetanaadkii, ayaan ogaaday in uu yahay nin abwaan ah. Waxaan u maleynayaa ciddii aan hore u aqoon laakiin daawatay video-ga aan ka hadlayo ay ducadiisa ka garteen in uu yahay nin hal abuur leh.
Sida uu hadda ii sheegay fannaan Waaberi ka tirsan, heesihiisa caanka ah ee Cali Cabdi Saayaq waxaa ka mid ah heesta uu ku luuqeeyo Fannaanka weyn ee Soomaaliyeed, Maxamed Suleymaan Tubeec AUN, ee oraneysa Dhool da’ay la Moodyee, Waan kugu Dhadhabayaayee, Dharaarteynu kulannaa, Dhulku ila Wareegee,…
Cali wuxuu ahaa nin sharaf iyo xushmad badan oo dhallinyarada ku dhiirri geliya waxbarashada iyo weliba shaqada markii aan shaqo billowga ahayn.
Inaksta oo xilligii uu dagaalku Muqdisho ka qarxay aan kala go’nay, waxaan haddana dib isugu aragnay Djibouti 1994. Dhowr jeerna Hargeysa ayaan si kooban isugu aragnay.
Anigu ma ogi qofka ay is hayaan iyo waxa ay isku hayaan toona, qormadeyduna taa kuma saabsana.
Mudane Cali Cabdi Saayaq, hadda waa Wasiir Ku Xigeenka Howlaha Guud ee Somaliland.
Posted by Yusuf Garaad at 19:45:00